Semalt: Advantages And Disadvantages Amin'ny Fampiasana Strategy SEO Black Hatah
Mijanona eo alohan'ny mpifaninana amin'ny fampiasana black hato SEO paikady azo atao. Ny mpivarotra amin'ny aterineto dia mety hampiasa tetikady mainty SEO hanandratra avo kokoa, hampitombo ny resadresaka ary hampiakatra ny fifamoivoizana tsy misy fandikana ny torolàlana Google. Noho izany, inona ny mainty hoditra SEO? Ny teny hoe 'hatavy mainty' dia midika hoe tetika mahery vaika SEO izay mandika ny fikarohana (ohatra Google,) fanao tsara indrindra sy toro lalana. Ny toetra malaza indrindra amin'ny SEO mainty hoditra dia ny hany loha laharana amin'ny fanodikodinana ny filaharana sy ny fitaovam-pitadiavana ary ny tsy firaharahiana ny mpampiasa.
Ny mainty hoditra SEO dia mampiasa fomba fanao toy ny teny fanalahidy, ny votoatin'ny votoatiny ary ny lahatsoratra miolakolaka mba hametrahana votoaty marevaka tsara ary manangona voka-pikarohana ao anaty motera fikarohana. Ankoatra izany, ny mainty hoditra SEO dia manamboatra tranokala mifangaro , mamorona kodiarana mifampidipiditra, pejy amin'ny rindrina, ary rohy misy akanjo. Google, tamin'ny farany dia niady ary naka fomba fanao mainty tamin'ny alàlan'ny famoahana fanavaozana ny Google Panda (laharana algorithm) fantatra amin'ny anarana hoe Google Penguin. Hatramin'izay fotoana izay, misy tranonkala mampiasa teknolojia mainty hoditra dia nosazian'ny Google. Amin'io lafiny io, ny fifamoivoizana ara-biolojika ao amin'ny tranonkala iray dia mety ho avoaka amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo tetikady SEO amin'ny tetikasa fananganana rohy, fa amin'ny fanaka fotsy hoditra. Igor Gamanenko, Semalt Mpitarika Success Success, dia manolotra anao hijery ity tetikady mainty manaraka ity:
Tikady iray: kodiarana
Nahazo fandresena tamin'ny alalan'ny tetika fantsom-piraisankely taona vitsivitsy lasa izay ny rohy kodiarana..Ankoatra izany, nandritra io vanim-potoana io, ny sasany manam-pahaizana fotsy SEO dia nidera ny fahaiza-manaon'ny kodiarana ifandrimbonana mba hamelezana ny laharan'ny tranonkala iray ao amin'ny Google. Ny kodiarana mainty dia nampiasa kodiarana mifandraika amin'ny fanamafisana ny tanjaky ny rohy entana, ary ny vokany dia ny manaparitaka ny pejy Internet avo kokoa amin'ny valin'ny fikarohana. Ny loha-hevitra ao ambadiky ny kodiarana mifandraika dia tsotra - hananganana lamin'ny tranokala izay mifandray avy amin'ny tranokala iray mankany amin'ny iray hafa, anisan'izany ny pejy maintin'ny mpandrindra. Ny pejin-tranonkala tsirairay ao anaty kodiarana dia mamoaka ny lahateny manaraka. Ny kodiarana dia mamorona rafitra mihidy. Noho izany, ny toeran'ny rohy dia manohy mampitombo hatrany ny rohy mankany amin'ny tranonkala mainty.
Tapa-bolana: Lokon'ny tranobe mifangaro
Ny tranoben'ny fifandraisana mifangaro dia tetikady izay manintona ny hevitra hoe manana rohy maromaro hanatsarana ny fisian'ny tranonkala iray. Ny tetika lehibe indrindra amin'ity paikady ity dia ny fametrahana ny lohateny ao amin'ny tranokala eo anivon'ireo tranonkala hafa amin'ny rohy manerantany toy ny New York Times. Amin'izany fomba izany, ny tompon'ny tranonkala dia afaka mamitaka ireo fitaovan'ny fikarohana mba hikarakarana ny vohikalany amin'ny fomba mitovy amin'ny tranokala hafa, ka manome ny laharana ambony kokoa.
Tikady telo: Tafika Fifandraisana
Ny paikady dia mampiasa ny foto-kevitra hampifandraisana pejy maoderina kokoa toy ny backlinks, toy ny tranokala mifangaro. Na dia izany aza dia mora kokoa ny fomba iray ahafahan'ny tompona tranonkala afaka manangana rohy amin'ireo pejy web misy mba hanatsarana ny lanjany sy ny fahefany. Ny SEO ny mainty hoditra dia mamorona rohy misy rohy miaraka amin'ny rohy rehetra manondro ny iray teo aloha, ary farany nanamafy ny fichier.
Tactika efatra: Fifandraisana amin'ny fako
Ny kapaoty mainty dia afaka mampiasa fampiharana toy ny Scrapebox mba hivezivezy amin'ny aterineto amin'ny fitadiavana zavatra avy amin'ny votoaty amin'ny teny fanalahidy sy ny antsipirian'ny adiresy amin'ny webmaster. Ny fampahalalana dia ampiasaina amin'ny fandefasana rindrambaiko maimaim-poana ary manangana fanakanana ny votoaty. Noho izany, amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana famonoana, ny mpampiasa dia afaka mandinika ny tranonkala ho an'ny olana ara-teknika SEO.
Maro ny zavatra mahakasika ny dingan'ny fananganana rohy. Anisan'izany ny dingana manaraka hanitarana ny rohim-pifandraisana. Mba hijanonana mialoha ireo mpifaninana, ny mpivarotra an-tserasera dia tokony hampiasa SEO mainty mainty fa amin'ny fomba fotsy fotsy Source .